CALL FOR GRANT APPLICATIONS – Kachinland Research Centre
The Global Research Network on Parliaments and People is now accepting applications for small grants (£1,000 – £5,000) from organisations and individuals wishing to undertake interdisciplinary research on Parliaments, elected politicians and politics in Ethiopia and Myanmar.
Applications are invited under the GRNPP’s Parliaments and People (P4P) programme which recognises that academics, artists, activists playavital role in helping to scrutinise, understand, communicate and support the processes and relationships required to deepen democracy.
Three broad themes are aimed at stimulating innovation with an emphasis on promoting historical, gender and cultural research:
1. Culture of representation
2. History of exclusion and instability
3. Imagining deeper democracy through media and the arts
Led by Professor Emma Crewe, this programme is funded by the Arts and Humanities Research Council and Global Challenges Research Fund and co-ordinated by SOAS University of London in collaboration with Enlightened Myanmar Research Foundation, Forum for Social Studies, Hansard Society, Jawaharlal Nehru University, and Leeds University.
We welcome applications from academic researchers, artists and those working the cultural and creative industries. The main applicant foragrant must consider either Ethiopia or Myanmar to be both their place of residence and their home country. We will give preference to those who generally get less access to funding opportunities.
For full details of the programme and information about how to apply visit our website: http://parliaments4people.com/grants/. If you have any questions about the network or the grants then please email us at grnpp@soas.ac.uk.
We anticipate making further calls for larger grants (£5,000 – £100,000) from March 2018. You can sign up to our newsletter via our website http://parliaments4people.com and follow us on Twitter at @GRNPP1
“(The Global Research Network on Parliaments and People) kaw nna sawkhkrawk ai lamamatu madi shadaw jaw na lamang”
Ndai lamang gaw Myen hte Ethiopia mungdan hta nga ai wuhpung wuhpawng hte sawkhkrawk ai lam hpe myitlawm ai niamatu parliament, mung masa hte ra lata hkrum sai dat kasa ni hte seng ai lam hpe sawk hkrawk lam galaw lu na matu yaw shada let madi shadaw gumhpraw satalin pawng (£1,000 – £5000) hpe jaw na lamang re.
Ya na shawk shawn hkrang ni hpe (The Global Research Network on Parliaments and People) lamang hte maren galaw sa mat na re. Myen mungdan hta democracy ladat ngang kang wa na matu, shada da matut mahkai ai lam, chye na hkat hkra galaw ai lam, sharin hkaja ai lam, shadut ai lam shingrai magam ni hta galaw nga ai hpaji munu ni, shingni ninghkring ni the tatut shamu shamawt nga ai niashanglawm ai lam gaw ahkyak kaba re ngu (The Global Research Network on Parliaments and People) gaw mu mada nga ai.
Ntsa lam yaw shada lam (3) hte labau, num la shinggyim masa hte htunghking hte seng ai sawktam ai lam ni hpe n-gun jaw na matu yaw shada ga ai re.
1. Gawng malai tai ai htunghking
2. Nsim nsa ai hte n shalawm la ai labau
3. Media hte shingni rau democracy ladat ngangkang wa hkra hkrang shapraw ai lam
(The Arts and Humanities Research Council and Global Challenges Research Fund) kaw nna madi shadaw jaw da ai ndai lamang hpe professor Emma Crew kawn woi awn sa wa nna Enlightened Myanmar Research Foundation, Forum for Social Studies, Hansard Society, Jawaharlal Nehru dakkasu hte Leeds dakkasu ni rau jawm galaw na rai nna London dakkasu School of Oriental and African Studies kawn nna lit la galaw sa na re.
Kadai ni mai shawkani?
Shingni hte htunghking hte seng ai lam ni hta galaw gunhpai nga ai shingni ninghkring, sawkhkrawk magam galaw ai ni hte hpaji munu ni shawk shawn lu na matu lajin dat ga ai. Madung shawk shawn ai wa gaw Ethiopia (shn) Myen mungdan hta shangai nga kaba ai wa hte mungdan masha hku nga ai ni rai ra na. Madi shadaw ai lam nau n lu ai ni hpe shawk na matu n-gun jaw ai.
Gara hku shawk shawn lu na?
Kata lam ni hpe ndai link http://parliaments4people.com/grants/ hta shang yu mai ai. Ndai (The Global Research Network on Parliaments and People) wuhpungalam grau chye mayu jang ndai email grnpp@soas.ac.uk kaw matut mahkai mai ai. Du na March 2018 hta mung grau law ai madi shadaw garum ai lamang ni hpe matut shana na matu hkyen nga ai re majaw dai shiga hpe lu na matu ndai link http://parliaments4people.com hta shang nna subscribe galaw mai ai. Twitter account @GRNPP1 hta mung follow di let shiga mai la ai.
“ပါလီမန်နှင့်လူထုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့သုတေသနအသိုက်အဝန်း (The Global Research Network on Parliaments and People) မှ သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မည့် အစီအစဉ်”
ဤအစီစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်း အား စိတ်ပါဝင်စားသူများအားလုံးအတွက် ပါလီမန်ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနှင့် ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် များဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အသေးစားထောက်ပံ့ကြေး စတာလင်ပေါင် ၁၀၀၀ – ၅၀၀၀(မြန်မာငွေ ကျပ် ၁၈ သိန်း – သိန်း ၉၀ ခန့်) ပေးအပ်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလျှောက်လွှာများကို “ပါလီမန်နှင့်လူထုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့သုတေသနအသိုက်အဝန်း၏ ပါလီမန်နှင့် လူထုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်” အောက်မှ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြစ်တွယ် ခိုင်မာစေရေးအတွက် အချင်းအချင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နားလည်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ ဖိအားပေးတိုက်တွန်းခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြသော ပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ တက်ကြွဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးပါသည်ဟု ပါလီမန်နှင့် လူထုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့သုတေသနအသိုက်အဝန်း (GRNPP) က ယူဆပါသည်။
ယေဘုယျ ဦးတည်ချက် (၃) ခုဖြင့် သမိုင်း၊ ကျား-မ လူမှုရေးရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သုတေသနတီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို အားပေးလှုံ့ဆော်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂။ မငြိမ်သက်မှုနှင့် ဖယ်ကျဉ်မှုဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်း
၃။ မီဒီယာနှင့် အနုပညာမှတဆင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ပိုမိုခိုင်မာအောင် ပုံဖော်ခြင်းများ
The Arts and Humanities Research Council and Global Challenges Research Fund မှ ပံ့ပိုးပေးပေးထားသည့် ဤအစီအစဉ်ကို ပါမောက္ခ Emma Crew မှဦးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ပညာအလင်းပွင့်မြန်မာသုတေသနဖောင်ဒေရှင်း (EMReF) ၊ Forum for Social Studies ၊ Hansard Society ၊ Jawaharlal Nehru University နှင့် Leeds University တို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ကာ လန်ဒန်တက္ကသိုလ် School of Oriental and African Studies မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြသော အနုပညာရှင်များ၊ သုတေသီများ၊ ပညာရှင်များအားလုံးကို လျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အဓိကလျှောက်ထားသူသည် အီသီယိုးပီးယား (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းသူနှင့် အိမ်အဖြစ်သဘောထားနေထိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေး ရရှိမှုနည်းပါးသူများကို လျှောက်ထားစေချင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို http://parliaments4people.com/grants/ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး သုတေသနအသိုက်အဝန်းအကြောင်းနှင့် ထောက်ပံ့ကြေးများအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက grnpp@soas.ac.uk သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လာမည့် မတ်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အလတ်စားနှင့် အကြီးစားထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ်များကို ထပ်မံ့ကြေညာပေးရန် ပြင်ဆင်နေသည့်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ မျက်ချေမပြတ်စေရန် http://parliaments4people.comသို့လာရောက်ကာ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး သတင်းလွှာများရယူခြင်းနှင့် တွစ်တာလိပ်စာ @GRNPP1 တွင် Follow လုပ်ထားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Previous A comparative study of Thomas S. Kuhn and Karl Popper
Next Call for locally led development concept papers